मलेसिया रोजगारको डिमाण्ड : कहिले र कहाँ ? हेर्नुस् बिस्तृतमा ! – Sandes Post
May 2, 2022 187
मलेसियाले आगामी जनवरी २८ देखि विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रिया शुरूवात गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
मलेसियाले विदेशी कामदार लिने निर्णय गरे पनि कामदारले पाउने तलब भने पुरानै कायम हुने दुतावासले जनाएको छ ।
नेपाली सुरक्षागार्डको तलब ३ हजार रिंगेट बनाउन श्रम रोजगार मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव !
मलेसियाको भ्रमणमा रहका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त छन्। शनिबार मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका गृहमन्त्री हमजाह वीन जैनुदिनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे।
पुत्रजयास्थीत गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल– मलेसिया सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा रहेका नेपाली सुरक्षागार्ड सहित अन्य श्रमिकको सेवा सुविधा र अधिकारको बिषयमा गृहमन्त्री जैनुदिनसँग छलफल भएको बताए।
श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षागार्डको मासिक तलब ३ हजार मलेसियन रिंगेट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली कामदार मेहनति र इमान्दार हुने चर्चा गर्दै गृहमन्त्री जैनुदिनले गोर्खा गार्ड्सका रूपमा मलेसियामा नेपालीहरूको राम्रो प्रभाव रहेको बताएका थिए।
नेपाली युवाहरूलाई सीपयुक्त बनाइ थप रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, शुन्य लागतको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने वीमा सुविधाको व्यवस्थाबारे पनि उनीहरुबीच छलफल भएको थियो।
नेपालमा सुरक्षा गार्ड सम्वन्धि तालिमको व्यवस्था गरी सीपयुक्त बनाउनेबारे समेत उनीहरुबीच छलफल भएको थियो।
Prevदुर्गेश थापा र पल शाह भेटवार्ता मा के कुरा भए ? हेर्नुहोस् भिडियो
Nextधर्ती माताकै अगाडी १९ बर्षिय युवतीलाई देउता चढेपछि, हेर्नुस नसोचेको भयो भिडियो